ओली र मोदीको वार्ता भदौ १५ मा, कुन-कुन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने ? – Everest Dainik – News from Nepal
ओली र मोदीको वार्ता भदौ १५ मा, कुन-कुन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने ?
काठमाडौं, भदौ १२ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन आउने भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग १५ भदौमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने तय भएको छ । वार्तामा काठमाडौं-वीरगञ्ज रेलवे लाइनको सर्भेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा एक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, पाँच वर्षमा रेलवे लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने र सम्पूर्ण लगानी भारतले गर्ने सहमति भएको थियो । मोदीको नेपाल भ्रमणका वेला यसबारे छलफल भए पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थिएन । ‘यसपटक सर्भेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
उनका अनुसार भारतबाट रक्सौलसम्म बल्क कार्गोसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ । मोदीले भारतका तर्फबाट निर्मित पशुपतिनाथ धर्मशाला हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री ओलीले १६ भदौमा औपचारिक वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । ‘श्रीलंकाको एक थिंकट्यांक र नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानबीच सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने तय भएको छ,’ ज्ञवालीले भने ।
ट्याग्स: KP oli and Modi, ओली र मोदीको वार्ता